Jereo ny teknika kanto mahavariana an'ny Matte Painting | Famoronana an-tserasera
"Fanjakan'i Tony Stark's Mt. Pilatus, CGChannel May matte painting FINAL" nataon'i gordontarpley dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 2.0
Gaga ve ianao amin'ny fijerena sarimihetsika miaraka amina toerana foronina mahatalanjona? Te hahafantatra ny fananganana azy ireo ve ianao?
Ity teknika voalohany ity dia fantatra amin'ny anarana hoe Matte painting. Izy io dia ny sary hita maso izay misy sary mihetsika azo averina avy amin'ny sosona samihafa. Andao ho fantatsika ny sasany amin'ireo mampiavaka azy!
Alao an-tsaina hoe sarotra ny mamerina mamorona ny toerana misy ny sarimihetsika toy ny The Lord of the Rings na Star Wars raha ny tena izy. Ho lafo be ny asa ary hitombo be ny vidiny. Ary tsy hitovy amin'ny sary mihetsika. Matte Painting dia mahavita mamerina mamorona ireo sehatr'asa ireo amin'ny fomba tsotra kokoaNa dia tsy maintsy lazaina aza fa asa tsara ihany koa izay tanterahin'ireo matihanina mahay.
1 Ny hosodoko Matte nentim-paharazana sy ankehitriny
2 Ilay manam-pahaizana momba ny Hosotra Matte
3 Toetra mampiavaka ny Matte painting
4 Sarimihetsika izay nampiasa sary hoso-doko Matte
5 Matte Fandokoana amin'ny lalao video
6 Mpanakanto manao hosodoko matte malaza
7 Fandaharana ahafahana manao Matte Painting
Ny hosodoko Matte nentim-paharazana sy ankehitriny
Taloha io teknika io dia natao tamin'ny fomba nentim-paharazana, nantsoina hoe "teknika fandokoana amin'ny vera". Ny tontolon'ny zava-misy dia nolokoina tamin'ny fanohanana fitaratra ary natambatra tamin'ny singa tena izy. Napetraka teo alohan'ny fakan-tsary ny fanohanana ary vokarina optika no novokarina, tamin'ny fomba toa hita tao anatin'ny setra ireo mpilalao.
Ankehitriny ny fizotrany dia niomerika tamin'ny fitambarany, ampiasaina tsy amin'ny sinema ihany, fa koa amin'ny dokambarotra, famolavolana editorial, lalao video, horonantsary fanabeazana, afisy… Ny fandaharana kintana ho an'ny fampandrosoana azy dia ny Photoshop.
Ilay manam-pahaizana momba ny Hosotra Matte
Afaka manatanteraka an'ity teknika ity zava-dehibe ny hananan'ny mpanakanto andiana fahaiza-manao toy ny: mahafehy ny fomba fijery sy ny refy, ny fahalalana jiro, ny fifehezana ny teknikan'ny Matte painting manokana, sns.
Toetra mampiavaka ny Matte painting
«CGChannel Aprily 2010 Matte painting» avy amin'i gordontarpley dia nahazo alalana tamin'ny CC BY 2.0
Ilaina tokoa ny fanitsiana ny fizarana sy ny fomba fijery (ireo zavatra kely indrindra lavitra indrindra, ireo zavatra akaiky indrindra indrindra, misy ifandraisany amin'ny haben'ny mpilalao, sns).
Ny loko koa dia mitana andraikitra lehibe. Ny zava-misy fa loko misy ny zava-misy izy io ary mifanaraka amin'ny tena singa ao amin'ilay sehatra no lakilen'ny asa tsara.
Ankoatr'izay, ny fomba hanatanterahana izany dia tena ilaina.
Izy io dia asa tena mandinika izay mitaky fampiharana be dia be mba ho lasa tena matihanina.
Sarimihetsika izay nampiasa sary hoso-doko Matte
Ny sasany amin'ireo horonantsary voalohany nampiasa ny Matte Painting dia ny King Kong (1933) sy Citizen Kane (1941), izay ahafahantsika mandinika ny fampiasana nentim-paharazana ny Matte Painting, araka ny efa noresahintsika teo aloha.
Ny sarimihetsika maoderina hafa izay nampiasa an'ity teknika ity dia: Star Wars (1977), ET (1982), The Lord of the Rings (1978), Avatar (2009), Transformers (2007) ary ny andiany Game of Thrones (2011 - 2019 ).
Matte Fandokoana amin'ny lalao video
Ity teknika ity dia fototra amin'ny famoronana lalao video, satria hahafahantsika mitatitra an-kalalahana sy mivezivezy amin'ny endrika mahavariana, natao hikajiana ny antsipiriany kely indrindra.
Mpanakanto manao hosodoko matte malaza
Iray amin'ireo mpanakanto malaza indrindra amin'ity sehatra ity i Dylan Cole. Ity mpanakanto amerikana mpanao hosodoko sady mpanakanto mahay ity dia namolavola ireo sehatra malaza indrindra amin'ny sarimihetsika The Lord of the Rings, Avatar, Alice in Wonderland, Maleficent ary snsetera lava. Mpandresy amina loka lehibe maromaro i Cole, manazava tsara ny asan'ny Matte Painting ao amin'ilay boky D'artiste Matte Hoso-doko: Kilasin'ny Master an'ny Digital Artists, izay iarahany miasa amin'ireo mpanoratra manam-pahaizana isan-karazany momba an'io lohahevitra io.
Mpanakanto malaza iray hafa i Yanick Dusseault, izay nianatra sary ara-teknika tao amin'ny Sheridan College alohan'ny nidirany tamin'ny tontolon'ny vokatra nomerika. Ahitana sarimihetsika toa ny Pirates of the Caribbean, Indiana Jones, Transformers, ary Pinocchio ny zavatra noforoniny. Talenta marina.
Fandaharana ahafahana manao Matte Painting
Ankoatry ny Photoshop efa voalaza dia misy programa hafa ahafahantsika mampivelatra ny Matte painting, toy ny Izy ireo dia Adobe After Effects na Maya sy Zbrush avy amin'ny Autodesk.
Ireo programa ireo dia misy maodely maodely, fanahafana, fandrafetana endrika, fandikana ary fitaovam-pitoviana mba hahafahanao mampivelatra ny hevitrao famoronana rehetra, mandika azy ireo amin'ny endrika mahatalanjona noforonina.
Manentana anao aho mba hitady taranja iray hianaranao an'io fomba tsara io amin'ny famoronana scenario.
Ary ianao, fantatrao ve ny teknikan'ny Matte painting?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Jereo hoe inona ilay Matte painting mahavariana